Indlu ye-Adobe - I-Airbnb
224 okushiwo abanye
Tequisquiapan, Querétaro, i-Mexico
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Diego
U-Diego Ungumbungazi ovelele
Yikhabethe lokwakha imvelo elilungele imibhangqwana, noma umndeni, linengadi, ngaphakathi uzothola ukwakheka okuthokomele kokhuni kanye ne-adobe, uzothola ukuthi zonke izikhala zenzelwe kanjani ukuphumula futhi ujabulele ukuphilisana, itholakala okujwayelekile Mexican endaweni 20min ukuhamba kusuka esigcawini main.
Ikhabethe elihle elenziwe ngezinto zemvelo, linengadi, Ngaphakathi uzothola ukuthi indawo yonke yayiklanyelwe kanjani ukuphumula.
Yindawo ekwazi ukungena ngasese, inendawo yokupaka etholakalayo ongakhetha kuzo ezimbili uma uyidinga, kunezitebhisi zokukhuphukela emnyango omkhulu.
Indawo ekwazi ukungena ngasese, inendawo yokupaka etholakalayo kodwa uma siyicela singanikeza enye indawo yokupaka, kunezitebhisi zokuya emnyango omkhulu.
4.92 out of 5 stars from 224 reviews
4.92 · 224 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-224
Itholakala endaweni evamile yaseMexico imizuzu engu-5 nje ukusuka edolobheni ngemoto noma imizuzu engu-20 uhamba ngezinyawo, indawo ethule nephephile exhunywe enkabeni, ungathatha uhambo oluya enkabeni noma esiteshini esidala sesitimela lapho uzothola khona umzila okhethekile wokuya. ukuhamba. ibhayisikili noma run.
Itholakala kumakhelwane ojwayelekile waseMexico eduze nedolobha ngemizuzu emi-5 nje emotweni noma ukuhamba ngezinyawo ezingama-20, indawo ephephile, ungahamba ngezinyawo uye edolobheni noma esiteshini esidala sesitimela lapho ozothola khona umzila okhethekile wokuhamba ngebhayisikili noma ukugijima.
Kwesinye isikhathi singazamukela mathupha ngentokozo enkulu, nokho-ke uma kungenzeki, umuntu esimethemba ngokugcwele uzokwamukela futhi axazulule noma yikuphi ukungabaza noma ukukhathazeka.
Ngezinye izikhathi singakwamukela ngomusa, kodwa uma lokhu kungenzeki, umgcini wendlu wethu ukuthi kungokwethemba kwethu okuningi uzokusiza futhi akusize nganoma yikuphi ukubuza noma ukungabaza.
Kwesinye isikhathi singazamukela mathupha ngentokozo enkulu, nokho-ke uma kungenzeki, umuntu esimethemba ngokugcwele uzokwamukela futhi axazulule noma yikuphi ukungabaza noma ukukh…
UDiego Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Tequisquiapan namaphethelo